Ixabiso eliphantsi le-BBW yeDoll yaDala yaMadoda aMakhulu amaBhoobs kunye namabele
Ezona Dolls zesini zeBBW zibalaseleyo | I-Ebony BBW yeDoll eSex
Ukusetyenziswa koonodoli be-BBW be-sex be-chubby kuye kwaziwa kakhulu, kwaye inani elikhulu leevenkile ze-BBW TPE ze-sex ze-sex kunye neevenkile zibonelela ngeendlela ezahlukeneyo zokwenziwa kunye nemodeli yoonodoli babo, ebonisa imikhwa eyahlukeneyo yesini abantu abaninzi abanayo. Ukuba ufuna ukudlala nge-esile enkulu kunye nesifuba, ngoko unodoli apha unokuhlangabezana neemfuno zakho.Unodoli we-BBW wesini ubuhle obukhulu! Ewe, siyazi ukuba uyawathanda amagophe amakhulu, izidubu ezinkulu, izinqe ezibanzi, amanenekazi atyebileyo kunye noonodoli bezesondo be-ebony bbw! Onke amadoda anqwenelwa ngokugqibeleleyo unodoli we-BBW wesondo Ngawona mantombazana atyebileyo adumileyo, anomzimba otyebileyo, iimpundu ezinkulu, isifuba esikhulu kunye neempundu ezibanzi. Ungafumana eyona doll yezesondo ye-BBW apha. Aba bafazi bahle kakhulu banamagophe agqibeleleyo, kwaye ukuthungwa kwesikhumba esithambileyo senziwe ngezinto ze-TPE ezikufutshane nomzimba womntu. Umzimba otyebileyo unika imvakalelo emangalisayo. Apha ungafumana olona khetho lubalaseleyo loonodoli abatyebileyo bezesondo okanye i-bbw tpe dolls zesini, abanye basenokuba chubby, siyazi ukuba uyabathanda. Fumana ngesondo ngokwenyani BBW onodoli in TPE iidoli ezintandathu kwaye oonodoli besondo be-silicone. Kutheni ke uthenge oonodoli bokwenyani be-sexy? Njengoko usenokuba uyazi, oonodoli bezesondo sele bekho ixesha elide, kodwa kusekho abathengi abaninzi abaziva beneentloni xa beqhagamshelana nathi okanye bacela ulwazi malunga noonodoli besondo njengokungathi iidoli zesini zaziyi-taboo, embi okanye engekho mthethweni. Kodwa inyaniso kukuba oonodoli bezesondo baziwa kakhulu kule mihla, kwaye bamkelwe ngakumbi kuluntu lwanamhlanje. Ingakumbi ngoku unodoli wesondo abenzi baphuhlisa oonodoli be-hyper-realistic, kwixesha elizayo siya kubona oonodoli bezesondo obufana nobomi kunye nobukrelekrele bokwenziwa obuya kubanika ukuziva ngakumbi komntu. Iingcali zikholelwa ukuba ubudlelwane kunye noonodoli besondo okanye oonodoli bothando iya kuba yinto eqhelekileyo kwiminyaka ezayo, njengoko iirobhothi, ubunyani benyani kunye nobuchwepheshe bekhompyuter ziya kwenza oonodoli bothando bacinge kwaye benze njengabantu.
Sikhuthaza ukusetyenziswa kwe unodoli wokwenene kwaye sifuna ukukuzisela oonodoli bezesondo ezilungileyo kakhulu ukwenza amaphupha akho abe yinyaniso. Ukuba ujonge unodoli wothando wokwenyani, jonga ingqokelela yethu, kwaye ukuba awuyifumani le nto uyikhangelayo, sazise kwaye siza kukunceda ufumane loo nodoli we-BBW wamaphupha akho. Sinikezela ngeyona ndlela ilungileyo yoonodoli bezesondo bokwenyani ngamaxabiso afikelelekayo kunye nomgangatho ophezulu. Kutheni sinezivumelwano ezinkulu kunye namaxabiso? Injongo yethu kukufumana oonodoli abangcono kakhulu ukuba wenze amaphupha akho abe yinyaniso.Ezi zidoli zesondo ze-chubby zihle kakhulu, zinezitayela zeenwele ezifashiniweyo, i-stylish yempahla yoyilo, ngokukodwa ubuso obuyinyani bubenza babonakale behle kunabasetyhini bokwenene. Xa kuthelekiswa nezi ntelekelelo BBW uthando onodoli, bayakwazi ukufezekisa iminqweno yakho kakuhle kakhulu. Phantsi kweempundu ezinamandla, onke amalungu elungu lobufazi kunye neempundu afihliweyo.
Ukukhulisa-i-158CM enkulu isifuba Iintsana eziNgcono ngeyona Ndo iphambili ye-AXB yesondo
Anastasia-158CM Thin Waist Big Boobs TPE Real Sex Doll
Ashley- 156CM yokwenyani iModeli yoMfazi oMncinci ekhaya abasetyhini abaFashileyo BBW unodoli wesondo
IMelville-155CM L-indebe ye-WM NO. 370 iNtloko yeZikhumba eziLusu eziNkulu zeMibele ye-TPE yesondo
I-Deirdre -I-155CM L-indebe ye-WM NO.372 Intloko yeDolophu eyiNtloko ye-TPE yeDoll yoLungu loMzimba
UZona-158CM Big Boob amaxabiso awodwa aBukhulu boBungakanani be-TPE yesini
UCatherine-155CM L-indebe ye-WM NO. 336 INtloko yeeNtshontsho eziNkulu zeTPE zeSondo
I-browning-i-158CM i-Curve entle e-Elegant Sensitivity Sexy Lips Red Lips TPE yesondo
I-Kellogg-158CM Striptease indebe yeLady Lady Puppy TPE yesini
UAndrea-156CM Amabele amakhulu aBasetyhini abaDala abaNgwe abaPhezulu abaXhaphaza i-BBW yesondo
Maureen-156CM Umhlolokazi Omnyama Umhlolokazi oBalaseleyo ebusweni oLusu lweSikhumba se-BBW
U-Obadiah-156CM Umfazi oshushu oMncinci kwiModeli yeHlabathi yokuNcitshiswa kwamabele e-BBW
I-Sawyer-156CM Imilebe emnandi yeNtombazana eSebenza eMsebenzini kuMphathi weZesondo
UFiona-156CM iKrisimesi i-Elf eshushu amaqhosha Amabele amakhulu amabele e-BBW
I-Conrad-156CM Big Boobs yaseYurophu Isitayile esinombala weNgqolowa kwi-BBW yesondo
UDoris-156CM Amehlo amaNtsundu aMnyama aMakhulu ama-Ass aKhulu athathe iShower Skin ye-BBW yeDoll
UDoria-156CM Big Breast Cowboy Sexy eshushu i-Ass ye-BBW yeDoll
I-BBW Tpe yeSondo yeDoll | Amanqatha ezesondo eBBW
Ziziphi iingenelo zoonodoli beBBW bale mihla?
Ngokufana nezinye iithoyi zesondo, oonodoli be-BBW bokwenene zineenzuzo ezininzi. Ukukhululwa kwisondo ukuya kwiqabane. Abanye abathengi bakwasebenzisa oonodoli bezesondo ukufota, ifashoni kunye nesimbo. Nabatshatileyo basebenzisa oonodoli bokwabelana ngesondo ukomeleza ubudlelwane babo. Amava akho edoli yokuqala aya kuba yodwa kwaye loo nodoli uya kuhlala ekhona kuwe. Oonodoli be-BBW balungile ukuba bahlale kunye; baya kunyaniseka, bakuphulaphule ngamaxesha onke. Basenokukunceda ukuba ufumane i-adventure yesondo yamaphupha akho. Kwabanye, oku kukuphakama kwe-libido. Nokuba libele elityebileyo, isisu esityebileyo, okanye impundu ekwenza uchulumancile, oonodoli be-BBW ngesondo banokwanelisa iminqweno yakho. Kwii-Urdolls, ungafumana unodoli we-BBW oya kwanelisa eyona mibono yakho inkulu (kunye nengqindilili). Iidoli ze-BBW zesini zokuzonwabisa kwexesha elikhulu. Kwangexesha elide, bekungekho zininzi iintlobo zoonodoli bezesondo. Kusenokuba kukho abantu amabele amakhulu okanye iesile elikhulu, kodwa kwabo kuthi abathanda yonke into enkulu, akukho zikhetho ezininzi. Ngaphezulu koko, izitayile ezindala zenziwe ngevinyl yomgunyathi okanye izinto zelatex kwaye azinakuthelekiswa nento yokwenyani. Faka oonodoli bezesondo be-BBW bokwenyani. Ukwanelisa umtsalane wamadoda amaninzi kunye nabasetyhini (okanye i-fetish) ekuthandeni iintsana ezivuselelayo, ngoku kukho oonodoli be-BBW abaninzi kwimarike. Kwakhona, basebenzisa izixhobo ezikumgangatho ophezulu njenge-TPE yokwenyani ukubonelela ngamava ayinyani kunye nolonwabo oluninzi, emva kwayo yonke loo nto, ufuna ukudlala ngala mabele atyebileyo abeka ubunzima kuwo. Nokuba uyabathanda abasetyhini abatyebileyo okanye ababhinqileyo abonwabileyo, kukho unodoli womthandi we-BBW wakho.
Itekhnoloji yoonodoli bezesondo ifike kude ukusuka kwixesha layo elidlulileyo eliqhumayo. Ngoku unokufumana ubufazi obufana nobuphilayo kunye namabele athambileyo angamanene kunye namabele onokuthi uwafunge ngokuchola umntwana omkhulu onomtsalane kwibhari! Nangona kunjalo, oonodoli be-BBW ngesondo abanayo imitya kunye neengxaki ozifumanayo kubudlelwane. Kwaye, ngenxa yokuba unokunxibelelana nabo, oonodoli bezesondo banamhlanje banokunceda ukukhulula isithukuthezi, ixhala kunye nokudakumba. Ukuba sele ukulungele ukwenza ukuba iingcinga zakho ezigqwethekileyo zibe yinyani, ke oonodoli be-BBW ngokuqinisekileyo bakho.
Zeziphi iimpawu ezigqibeleleyo zikanodoli wesondo we-BBW?
Singathanda ukuyithetha yonke into kuba sithetha nabafazi abakhulu kwaye kukho oonodoli abaninzi bezesondo abathandanayo! Nangona kunjalo, nazi ezinye izinto zikadoli we-BBW ezinokuthi zivuyise umsukeli wakho wangaphakathi we-chubby. Izinqe ezibanzi, ezigobileyo: Abantu abaninzi bakhetha umzimba ogobileyo ukuya kubukhulu obuziro, kwaye iimpundu ezityebileyo ezinje ngoonodoli beBBW yenye yezona zinto zinkulu. Le ayingonodoli wesondo we-bbw konke konke, kodwa iesile ezinkulu ezingqukuva: ezimile, iibhutsi ezinwebekayo ziyinguqu enkulu kwabaninzi, kwaye aba nodoli be-BBW ngokuqinisekileyo banabo. Amabele amakhulu: Uthando lwamabele amakhulu luhlala lusongelwe kukhetho lwabafazi abakhulu, kwaye njengoninzi lweempawu, unokwenza ngokwezifiso ubungakanani bengono yoonodoli bakho be-BBW, best bbw oonodoli sex ndikuhenda kakhulu.
Iidoli ze-Chubby zesini ezithengiswa kwii-Urdolls
Abasetyhini abanomzimba ogcweleyo bahlala bekhupha isibheno esinamandla, ngakumbi aba nodoli bokwenene be-silicone yesini. Ziyathandwa kakhulu ngenxa yokuba banokuxelisa abafazi ebomini bokwenene kwaye banikeze umzimba ogqibeleleyo, iimvakalelo zokwenyani kunye neenzuzo ezichanekileyo kubo bonke abantu ukuba baphambane. Umntu otyebileyo Oonodoli bezesondo be-BBW bayathengiswa iya kuthatha indawo yomfazi wakho ophuphayo kwaye ithengise ngexabiso elifikelelekayo.Kutheni kufuneka uthenge unodoli we-BBW weSex? Esona sizathu sicacileyo sokuba ufanele ufumane unodoli we-BBW kukuba abafazi abakhulu bayakuvula. Ukuba ubusoloko unobushushu bokuzala okukhulu, iibhutsi ezinkulu kunye namanani apheleleyo, lixesha lokuba uzonelise! Kwaye, xa uthenga kuthi, unokuqiniseka ukuba ufumana elona xabiso lilungileyo, olona mgangatho uphezulu kunye nolona khetho luqhelekileyo naphi na. La mantombazana atyebileyo oonodoli bezesondo ezityebileyo, zikhangeleka zinyanisekile kwaye zinomtsalane, ude ucinge ukuba ngamanenekazi okwenene. Ulusu lwabo luvakala luthambile kwaye lugudile, kwaye linobukhulu bomfazi wokwenene. Zimpahla ezinkulu kwaye zinempundu enkulu engqukuva, ungalala naye qho ebusuku. Unodoli we-bbw wokwenyani h njengembonakalo yobungakanani bobomi kunye nemvakalelo engaphaya kwendalo enokulinganisa ngokupheleleyo umfazi wokwenene, ikubonelela ngobudlelwane bezesondo obunokuthi busetyenziswe kwizixhobo ezifunyenwe ngokwesondo zamabele amakhulu, iesile ezinkulu, umlomo, ubufazi, kunye ne-anus. . Phantse zonke izinto ezinokwenzeka ngokwesondo zinokufezekiswa, zikunika ngokwenene iqabane eligqibeleleyo lezesondo.
Iividiyo zikaNodoli ngesondo:
Ngoonodoli abaninzi bezesondo, jonga ividiyo engezantsi